UMBONO OPHEZULU IPrinceton LRT iqhagamshelwe kufutshane neMall wt WIFI
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguAndrew
Uya kusithanda istudiyo sethu kamsinya nje ukuba ungene: ikhaya, likhululekile kwaye lilungele ngokupheleleyo. Lonke undwendwe esilundwendweleyo luthande isixeko sethu esitshayelayo kunye nentaba.
Ukubukela umboniso e-Araneta? Kukude izitishi ezi-2 njengoko usecaleni kwe-LRT-2 Gilmore Station. Uphononongo lwebhodi okanye uviwo? Le yindawo eneevenkile zeyure ezingama-24 kunye nokutya okukhawulezayo ezantsi ngelixa iRobinsons Magnolia Mall kunye neBroadway Centrum zikumgama wokuhamba.
I-CableTV, ikhitshi, iitawuli, isifudumezi? Ewe kubo bonke. (cofa apha ngezantsi ukufunda).
Akukho SUPERHOST Ibheji. Ngoba?
I-Airbnb 'yenza ngokutsha'. Asikwazanga ukufudusa isimo sethu sokuba yiSuperhost ngokutshintsha kwegama ukusuka kwelilomhlobo wam ukuya kwelam. Qiniseka ngokugqwesa kweSuperhost yenkonzo.
Nalu uphononongo lweyunithi yokwenyani yeendwendwe zethu:
"U-Andrew ngumamkeli okhethekileyo. Unxibelelwano olukhulu. Uhlala ekhona kwaye usombulula yonke into ngemizuzu embalwa. Umntu onoxanduva kakhulu kwaye onobubele. Ndiyithandile kakhulu le ndawo. Ingakumbi le yunithi enombono entle kwaye ixhotyiswe ngokupheleleyo. Ndiza kuza. ndibuyele apho kwakamsinya. Enkosi ngokukhethekileyo kuNathan! Unobubele kakhulu kwaye umntu olungileyo."
(Alfonso, ngoFebruwari 2020)
"Indawo ka-Andrew icocekile kwaye icocekile. Igumbi livumba kakhulu kwaye licocekile xa sifika. Yonke into oyifunayo iyafumaneka. Uya kuba nombono obalaseleyo wezibane zedolophu kunye nezakhiwo. Kunconywa kakhulu kuzo zonke iindwendwe. Ngokwenene i-superhost! "
(Charmain, kaJanuwari 2020)
"Indawo yayingcono kunokuba ndandilindele. Indawo enoxolo, imbono enhle kakhulu, yongeza intuthuzelo kubomi besixeko sakho. Ilungile kakhulu ukuhlala ngenxa yokuzonwabisa kunye ne-intanethi ekhawulezayo. Umninimzi uhlala kakhulu kwaye uphendula ngokukhawuleza kwimibuzo. Enkosi kakhulu Andrew! Ngokuqinisekileyo uza kubuya."
(Benson, Novemba 2019)
I-studio yethu ibekwe kumgangatho we-40 kwaye inika umbono ophefumulayo we-metropolis kunye neentaba ezijikelezayo zaseRizal naseLaguna.
Siziintandokazi zabakhenkethi abadlulayo abafuna uncedo lokukwazi ukuhambahamba kwisiXeko saseQuezon, eCubao, eGreenhills, eManila naseDivisoria. Iindwendwe zexesha elide ngokuqhelekileyo ngabafundi abaphonononga uviwo lwebha kunye neebhodi zonyango. (Ukuba yimfuno yakho leyo, kufuneka undithumelele umyalezo wamaxabiso exesha elide).
Isitudiyo silungele abantu aba-2 ababelana ngebhedi ephindwe kabini; kukho i-sofa yokulala yomntu wesithathu. Sibonelela ngeetawuli kunye nezinto zangasese ukuze ungaze nezakho.
Ikhitshi lixhotyiswe ngesitovu, imicrowave, kunye nezinto zasekhitshini ezibalulekileyo ukuze ukwazi ukuzilungiselela ukutya kwakho ngokulula.
Indawo yokutyela ilungisiwe ukuze ukwazi ukubukela umabonakude ngelixa wonwabele ukuluma. Ewe kunjalo, unokuba usefowunini uphequlula nge-wifi yethu yasimahla.
• 24m² 1BR, umgangatho wama-27
• i-wi-fi kunye ne-skycable
• I-AC ebandayo
• Ishawari eshushu
• Ibhedi egcweleyo + isofa; Ulungiselelo olutofotofo lwe-3, ubuninzi buyi-4
• Kubonelelwe ngeetawuli nezinto zangasese ezibalulekileyo
• 24/7 ukhuseleko lwesakhiwo
• Ufikelelo echibini (ngomrhumo)
• Ikhitshi elisebenzayo elinempahla yokutyela
• Eyona migangatho iphezulu yococeko
• Umbono omangalisayo!
Ifanelekile: iintsapho ezincinci, izibini, iqela labahlobo
Siyathemba ukuba uya kuligcina ifulethi lethu likwimeko entle. Ngaloo ndlela, sinokuyilungiselela ngokukhawuleza kwiindwendwe ezilandelayo.
4.78 · Izimvo eziyi-51
Indawo yokuhlala yasePrinceton ibekwe kanye ecaleni kweSikhululo se-LRT-Gilmore-indawo yokuphosa ilitye kude neRobinson's Magnolia Mall kunye neBroadway Centrum.
Ndityelela kwiiPhilippines rhoqo. Ukuba ndinokuba sedolophini ekufikeni kwakho, ndingakuvuyela ukukubona. Ngokufanayo, ndinomncedisi kunye nomncedisi wokuhoya iimfuno zakho apho kunokwenzeka.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Quezon City